Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Brussels Airlines dia manolotra famantarana marika vaovao
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Brussels Airlines dia manolotra famantarana marika vaovao.
Ny Brussels Airlines dia mitazona ny fifantohany amin'ny kaontinanta Afrikana ary manamafy ny toerany eo amin'ny tsena miaraka amin'ny marika vaovao.
Ny Brussels Airlines dia nanafaingana sy nihamafy tamin'ny taona 2020 ny drafitra fanovana Reboot Plus, mba hanomanana ny lalana ho an'ny orinasa iray manaporofo amin'ny ho avy izay afaka miatrika ny fifaninanana, miaraka amin'ny rafitra ara-bola tsara sy mahasalama.
Taorian'ny fanavaozana dia nanomboka ny dingana faharoa amin'ny drafitra Reboot Plus ny orinasa: ny dingana fananganana sy fanatsarana.
Miova ho lasa zotram-piaramanidina salama sy mahasoa ny orinasa Belzika izay manolotra fomba fijery ho an'ny mpanjifany, mpiara-miombon'antoka ary mpiasa.
Androany, Brussels Airlines dia manolotra mari-pamantarana marika vaovao, manamafy ny toerany eo amin'ny tsena amin'ny maha mpitatitra an-trano any Belzika sy manam-pahaizana momba ny Afrikana. Vondrona Lufthansa.
Ny loko nohavaozina, ny logo vaovao ary ny sarin'ny fiaramanidina no famantarana hita maso amin'ny toko vaovaon'ny zotram-piaramanidina, milaza ny fahavononany hiatrika ireo fanamby ho avy ary manantitrantitra indray ny maha zava-dehibe ny marika Belzika. Toko iray misy fifantohana mafy amin'ny traikefan'ny mpanjifa, ny fahatokisana ary ny faharetana ary mitazona ny rafitry ny vidin'ny fifaninanana.
Vokatry ny krizy COVID-19, Brussels Airlines nanafaingana sy nihamafy tamin'ny taona 2020 ny drafitry ny fanovana Reboot Plus, mba hanokafana ny lalana ho an'ny orinasa manaporofo amin'ny ho avy izay afaka miatrika ny fifaninanana, miaraka amin'ny firafitry ny vidiny tsara sy mahasalama.
Ny filohan'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB), Cuthbert Ncube, dia mankasitraka ity hetsika nataon'ny Brussels Airlines ity, satria mifanaraka amin'ny iraka ATB hampiroboroboana an'i Afrika ho toerana iray amin'ny fanitarana ny safidy fitsangatsanganana sy fizahan-tany.
Taorian'ny fanavaozana dia nanomboka ny dingana faharoa amin'ny drafitra Reboot Plus ny orinasa: ny dingana fananganana sy fanatsarana. Brussels Airlines Mitodika amin'ny ho avy izao ny sainy miaraka amin'ny fampiasam-bola stratejika amin'ny traikefan'ny mpanjifa nohatsaraina, ny teknolojia vaovao, ny nomerika, ny fomba fiasa vaovao ary ny fampivoarana ny mpiasa ao aminy.
Miova ho lasa zotram-piaramanidina salama sy mahasoa ny orinasa Belzika izay manolotra fomba fijery ho an'ny mpanjifany, mpiara-miombon'antoka ary mpiasany; fiaramanidina manana fifantohana tsy tapaka amin'ny tontolo iainana sy ny fampihenana ny dian-tongony ara-tontolo iainana. New Brussels Airlines.
“Tianay ny hanamarika mazava ny fanombohan’ny Vaovao Brussels Airlines. Ho an'ny mpanjifantsika, izay mendrika ny tsara indrindra, fa koa ho an'ny mpiasantsika, izay manolo-tena amin'ny fanovana izay arosontsika sy izay andraisan'izy ireo anjara isan'andro. Izany no antony atolotray anio ny dikanteny hita maso ny fanombohanay vaovao. Miaraka amin'ity mari-pamantarana marika vaovao ity, vonona izahay hampiseho amin'ny mpanjifanay, ny mpiasanay, ny mpiara-miombon'antoka aminay ary ny mpandray anjara hafa rehetra fa mamadika pejy izahay. Amin'ny maha-iray amin'ireo zotra an'habakabaka Lufthansa Group efatra, dia manorina ny lalana mankany amin'ny hoavy mampanantena izahay. Hitanay ho mariky ny fahatokisan-tena amin'ny orinasanay ity mari-pamantarana vaovao ity – manamafy indray ny maha-izy anay amin'ny maha mpitatitra an-trano any Belzika.” - Peter Gerber, Tale Jeneralin'ny Brussels Airlines.